Ezona zicelo zilishumi zokulinganisa umgama we-Android | I-Androidsis
UAron Rivas | 31/03/2021 23:59 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Amaxesha amaninzi sinokuzifumana sikwimeko nakwiimeko ekufanele ukuba sibenazo umgama phakathi kwezinto ezithile okanye abantu. Oku kusebenza nangakumbi ukuba ungumntu ofuna ukwenza imilinganiselo rhoqo, nokuba yeyomsebenzi wakho, uyithandayo okanye incasa elula. Ngelishwa, asisoloko sinezixhobo eziyimfuneko nezifanelekileyo ukubala ezi metric, kodwa ubusazi ukuba ifowuni yakho inokusebenza ngolu hlobo?
Injalo ke. Kukho usetyenziso oluninzi kwiVenkile yeGoogle yokuDlala ye-Android apho uninzi luluhlu lwemisebenzi yokulinganisa umgama eluncedo, kwaye kwesi sithuba sokudibanisa sikudibanisa ezona zilishumi zilungileyo ukuze ungahlali ngaphandle kokwazi umgama phakathi kwezinto, iindawo kunye neeperimitha, phakathi kwezinye izinto.
Iiapps esizikhankanyileyo kwaye sizichaze apha ngezantsi zikhululekile kwaye zinegama elihle kunye nokukhuphela okuninzi kwiVenkile yokuDlala, kubalulekile ukuba uqaphele. Akukho nto uya kufumana okona kudidi lwayo.
1 Imilinganiselo yeendawo nemigama
2 Isimahla iAltimeter 2021 -Linganisa iAltitude, iCompass
3 AndMeasure (Ummandla kunye nomgama)
4 Inqanaba leklinikhi + kwiqamza
5 Indawo yokubala umhlaba
6 I-Altimeter echanekileyo
7 I-Barometer echanekileyo
8 INkulumbuso yoMlawuli-uMlawuli, ubude bemilinganiselo yekhamera
9 I-ARPlan 3D: UMlawuli, ukulinganisa iTape, uMgangatho weSicwangciso soMgangatho
10 ICamToPlan -Umlinganiso weRA / umlinganiso weTape
Imilinganiselo yeendawo nemigama
Ukuqala sinesi sicelo sinomdla, esifumaneka njenge isixhobo esikhulu ukuba into oyifunayo kukwazi indawo yommandla, iperimeter yayo okanye umgama phakathi kwamanqaku amabini nangaphezulu.
Ukuba ukwindawo evulekileyo efana nebala legalufa, igadi enkulu okanye indawo yezemidlalo enjengebhola ekhatywayo okanye ibala lebhola, indawo yokulinganisa intsimi usebenzisa iGPS lukhetho olunokuba luncedo. Unokuqikelela iimetrikhi ezahlukeneyo ngalo msebenzi oya kukunceda ucwangcise kwaye wenze ulwakhiwo okanye nantoni na onayo engqondweni.
Le app ayisebenzisi kuphela kubantu abakwishishini lokwakha, ngenxa yeendlela ezichanekileyo ezinikwayo, kodwa nakumafama kunye namafama afuna ukwenza imilinganiselo yeendawo zokutyala kunye nomhlaba wezityalo kunye nomsebenzi kunye nemfuyo. Olunye uphawu olunika lona kukuba Ikuvumela ukuba wabelane ngeeKhonkco zikaGoogle zomnye umsebenzisi ukuze uvule kwaye ubone.
Isimahla iAltimeter 2021 -Linganisa iAltitude, iCompass
Le yenye yeenkqubo zokulinganisa umgama ngokubanzi kwaye ziluncedo. Eyona inomdla kakhulu leyo unikezelo lubalo lobude, njengoko iza nomsebenzi we-altimeter ekuvumela ukuba wazi umgama othe nkqo phakathi kwayo nayiphi na indawo eMhlabeni esekwe kwinqanaba lolwandle.
Esi sicelo sinekhampasi eya kukunceda ukuba ungalahli ulwazi lwakho. Oku kunokuba luncedo ngakumbi ukuba ungumntu othabatha uhambo kunye / okanye okhenkethayo. Enye into ayibonisayo yikhampasi yokuphakama.
Ngakolunye uhlangothi, Esi sixhobo sikuvumela ukubala kunye nokulinganisa ubude kunye nobubanzi kwiifom ezahlukeneyo, apho i-UTM (i-Universal Transvers Mercator), isidanga seDMM kunye nesidanga sokugqibela, isidanga seDD sokugqibela, isidanga se-DMS kunye nemizuzu kunye nemizuzwana yesini.
Awunakulinganisa kuphela ukuphakama kwalapho ukhoyo, kodwa unako Unokwazi nokuphakama kwendawo emephini esikunikwa sisicelo. Unokuthatha iifoto zeendawo ozibalayo, kunye nokwabelana ngazo, kwaye kuza nekhampasi kunye neewijethi ze-altimeter. Ngokunjalo, phakathi kwezinye izinto, kukho umbikezeli wemozulu ekuvumela ukuba ubazi ubushushu obukhoyo kwaye wazi ukuba imozulu izakuba njani kwiintsuku ezisi-7 ezizayo, into eluncedo kakhulu ukuba uza kucwangcisa umsebenzi ongaphandle.
Umthuthukisi: IGiga Logix
AndMeasure (Ummandla kunye nomgama)
Ngokungafaniyo neeapps ezininzi zohlobo lwazo, oku kukukhanya okuphezulu. Akunzima ukuba yi-1.9 MB, kodwa oko akuthethi ukuba ayinayo indawo echanekileyo kunye nemisebenzi yokulinganisa umgama.
Ungayisebenzisa ukulinganisa amanqaku emephu emephini, ngokungathi ngumlawuli, kwaye eyona nto intle malunga noku kukuba inokwenziwa ngexesha lokwenyani. Isebenza njengeGPS ikuvumela ukuba wazi indawo okuyo kwimephu kwaye ubale iindawo ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeehektare, iimitha zesikwere, iikhilomitha ezisikwere, ii-ares, isikwere seemayile, iinyawo ezikwere iihektare. Ngokulandelayo, ikuvumela ukuba uphawule amanqaku kwimephu onokuthi emva koko uhambe uye kuyo.
Phakathi kwezinye izinto, ngale sicelo unokwabelana ngomgama kunye nokubala kwendawo, kunye nezikrini nge-imeyile kunye neGoogle Drayivu.
Umthuthukisi: UMikkel christensen
Inqanaba leklinikhi + kwiqamza
Ngoku sihamba kancinci ukusuka kumlinganiso wemilinganiselo yomgama kunye nokubalwa kwendawo, sifumana le app, ethi Owona msebenzi wayo ubalo lwamathambeka, onokulinganisa ngawo i-engile ngokuthe nkqo.
Ngomgangatho weKlinikhi + kwiqamza unako, umzekelo, ukulungelelanisa isakhelo ukuze siqonde kwaye sisisebenzise kulwakhiwo ukubala njengendawo ekubhekiswa kuyo, ukuze ulinganise into oyifunayo, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Iza ngeendlela ezintathu ezikhoyo, eziziikliniki, ikhamera kunye nenqanaba lomoya. Ukongeza ekubaleni ii-angles eziqinisekileyo, usetyenziso lunokulinganisa i-angle ehambelana phakathi kweefowuni kwindawo nganye.
Umthuthukisi: iplakhowudi ™
Indawo yokubala umhlaba
Indawo yokubala umhlaba mhlaba yenye into elungileyo onokuyisebenzisa uqikelelo lweemetriki zomgama ezininzi ezinje ngendawo, umphezulu, kunye nomhlaba wendawo enikiweyo, kunye nomgama onokubakho phakathi kweendawo ezahlukeneyo.
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye igqibelele. Ukongeza, inokuchaneka okuphezulu okuya kusivumela ukuba sifumane izibalo ezinokuthenjwa esinokuthi sizisebenzise njengesalathiso sokucwangciswa nokusetyenziswa kolwakhiwo, phakathi kwezinye izinto.
Zininzi izicelo ezinokulinganisa ukuphakama kwayo nayiphi na inqaku, kodwa ayizizo zonke ezinokuyenza ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi. Kwaye le app, iAltimeter echanekileyo, isebenza njalo, ngaphandle kwesidingo sokufikelela kwi-Intanethi, ke inokusetyenziswa nangaliphi na ixesha naphi na.
Kule nto, ineendlela ezintathu ezenza ukwazi ukuphakama ngokuchanekileyo, kunye nokusebenza kwesatellite, ngokubala ukuphakama komhlaba kwindawo yakho yangoku kwimephu yokuphakama komhlaba okanye kwifowuni yoxinzelelo (kuphela ukuba iyafumaneka). Nokuba yeyiphi na, usetyenziso lunokuqikelela ukuphakama kwendawo ngeemetriki ezinokuthenjwa, nangona ezi kufuneka zithathwe njengesalathiso kwaye hayi njenge-100% yokubala ngqo.
Ukusebenza kwale app kubalasele, kunye nonxibelelwano olunikezelayo, olulula kwaye oluthandekayo kwiso. Esi sesinye isicelo, ngaphandle kwamathandabuzo, esiboniswa njenge enye yezona zinto zibalaseleyo kudidi lwayo kwaye, emva koko, kolu luhlu.
Umthuthukisi: Iilebhu ze-AR
Ukuba into esiyifunayo kukulinganisa uxinzelelo lomoya, i-Barometer echanekileyo yeyona nto ilungileyo yoku. Oku kusivumela ukuba sazi i-metric ngokulula nangokukhawuleza.
Inokulinganisa uxinzelelo lweatmosfera naphi na apho ukhoyo. Ukongeza, ikubonisa itafile yoxinzelelo lomoya kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, ukuze ubone utshintsho oluye lwavela imini yonke. Ikwavumela ukuba wazi isikhululo seenqwelomoya esikufutshane.
INkulumbuso yoMlawuli-uMlawuli, ubude bemilinganiselo yekhamera
INkulumbuso yoMlawuli yi-app enomsebenzi ophambili linganisa umgama ngekhamera, kunye ne-Augmented Reality algorithm eqhayisayo, nangona oku kuyakusebenza kuphela kwii-mobiles ezihambelana ne-ARCore, kubalulekile ukuba uqaphele.
Ukuthatha ithuba lomlinganiso womgama, kuya kufuneka ukhombe inqaku ngendiza ethe tyaba ngekhamera, emva koko usetyenziso lwenza yonke enye into. Ungabala iimetriki ngeesentimitha, iimilimitha, iimitha, kunye nee-intshi. Unokubala ii-angles kunye nezinye iimetriki zomdla njengeparimeter kunye nommandla. Ukongeza, unokulinganisa enye idatha njengokuphakama, umgama wendlela, kunye nokunye. Isixhobo esipheleleyo ngokufanelekileyo.
I-ARPlan 3D: UMlawuli, ukulinganisa iTape, uMgangatho weSicwangciso soMgangatho
Ukuba iselfowuni yakho iyahambelana ne-ARCore kwaye ufuna ukuthatha ithuba layo, i-ARPlan 3D sesinye isicelo onokuyenza ukuba ufuna ukulinganisa umgama njengaleyo ichazwe ngaphambili. Kwaye kunjalo Le app inomlinganiso weetape onokubala kuwo umgama kwiiyunithi ezahlukeneyo ezinjengeesentimitha okanye iimitha. Ikwavumela ukuba wazi ulwazi oluthe kratya malunga nendawo enje ngobude, umjikelezo kunye nendawo, enonxibelelwano olulula ukuyisebenzisa.
Ukulinganisa iindawo ezivaliweyo, ezinjengezo zendlu okanye indlu, i-ARPlan 3D yenye yezona ndlela zibalaseleyo ze-Android. Ungabala umgama kunye nemilinganiselo yeefestile, iingcango, iindonga kunye nokunye. Ikwavumela ukuba ucwangcise izicwangciso enkosi kuyo yonke imisebenzi kunye nezixhobo eziza nazo.
ICamToPlan -Umlinganiso weRA / umlinganiso weTape
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sinenye inkqubo yokulinganisa i-Android yenye yezona zinto zibalaseleyo esinokuzifumana namhlanje kwiGoogle Play Store.
ICamToPlan iyafumaneka njenge isixhobo esiqhayisa ngokuchaneka kakhulu xa kubalwa ubude nemigama ngokukhawuleza nangokulula. Kuza nomlawuli kunye netape yokulinganisa onokulinganisa ngayo nantoni na, kunye nokusetyenziswa kwekhamera kunye neARCore (kuphela esetyenziswayo kwii-mobiles ezifanelekileyo).
Umthuthukisi: Imisebenzi yoTasmanic
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zilungileyo zokulinganisa umgama ze-Android
Iimidlalo ezingama-24 zokubaleka ezilungileyo ze-Android